Bog lagu Shaaciyey Magacyada Dadka Dhallaanka u Galmooda - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Bog lagu Shaaciyey Magacyada Dadka Dhallaanka u Galmooda
La daabacay måndag 7 november 2011 kl 17.13
Bog internetka ee dalkan ka aloosan ayaa lagu shaaciyey war-bixinnada dadyowga lagu xukumey dembiga ah iney u galmoodeen dhallaan da'yar (pedofil), iyadoona boggaa lagu andaceeyey hayadda kormeerka ee wararka lagu daabaco bogagga internetka iyo in falkaasi yahay mid jebinaya xeerka war-bixinnada shakhsiga.
Hayadda boliiska ayaa laga soo xigtey in bogagga lagu soo daabaco magacyada iyo war-bixinnada shakhsiyada noocaasiya ey aad kor ugu kaceen sannadihii ugu dambeeyey, iyadoona ey adag tahay in cid loo raacdo.
Sida uu sheegey af-hayeen boggaa u hadlayay in muhiimadda ka dambeeysaa tahay sidii dood middaa looga dhalin lahaa iyo in ciqaabta la adkeeyo. Ruuxaa ayaa sidoo kale sheegey in aannu masuuliyadda sharci ku lahayn bogga, inkastuu filayo in boliisku wareeysi ugu yeero.
Iyadoona haddii dembi ey galeenna aannu u arag wax dhibaato ah maadaama uu damiirku kala weyn yahay, sidaa-daraadeedna loo ilaawo dembiga la galay, sida uu sheegey.
Iminkadan ayuu sal-dhigga boggaasi ku yaalaa dalkan Iswiidhen, halka ey ku talo jiraan iney u raraan dalka Mareeykanka, halkaasina oo xeerar ka duwan ey ka howl-galaan.